Ukubhekisa igama lokuKhangela kwiNombolo yasimahla
Ukulandelela ukuguqulwa kwe-SEO ngefowuni
NgeCawa, ngoJulayi 11, 2010 NgoLwesibini, nge-18 kaDisemba ngo-2012 Douglas Karr
Siyavuya ukuba nomthengi omtsha kule nyanga owenza urhwebo olubanzi kwimidiya yesiko. Ngonomathotholo, umabonwakude kunye neposi ethe ngqo, indlela eqhelekileyo yokulandela umkhankaso ngokunika ikhowudi yekhuphoni okanye ikhowudi yesaphulelo enxulumene ngokuthe ngqo nesithembiso.
Nangona kunjalo, ngamashishini anesebe elingena ngaphakathi lokuthengisa ngomnxeba, eyona ndlela isetyenzisiweyo kukuthenga iibhanki ze Iinombolo zefowuni ezingahlawulelwayo kwaye usebenzise inombolo yefowuni eyahlukileyo kwiphulo ngalinye. Izifundo zamva nje zibonise ukuba ipesenti ephezulu yeendwendwe zewebhu ziya kubiza kunokuba zinxibelelane nenkampani ngefom okanye nge-imeyile (Iipesenti ezingama-40 kukhangelo lwasekhaya).
Lo mthengi unobukho obukhulu bewebhu kwaye sele sonyuse utyelelo kwiziko labo kwigama elinye elingundoqo nge-15% kwiintsuku ezingaphantsi kwe-30. Ukwanda kokundwendwela kumnandi, kodwa kufuneka sikwazi ukukhomba ukugcwala kwezithuthi kuguqulelo lokwenyani. Umxhasi wethu kufuneka aqonde ukuba indleko zokwenza ukukhangela kwiinjini yokukhangela zongeza iidola kumgca osezantsi. Isisombululo kukutshata ezi ndlela zimbini… ulungiselelo lweinjini yokukhangela lujolise ngqo Iinombolo ezingahlawulelwayo.
tags: ukulandelela umnxebaiifowuniiinombolo zefowuni ezinamandlaumkhondo wefowunienjini yokukhangela nounSEO
Enkosi-Blogger! Isenzo seZikhalazo seDMCA
Yakha Ithemba Ngokuthi Hayi!
Jul 12, 2010 ngo-8: 11 AM
Doug, ndiyazi inkampani enenombolo yefowuni enye kuphela kodwa yongeza elula "Buza u-Amy" okanye "Buza uJim" kwinombolo yabo yefowuni yasimahla yokuthumela. Akukho u-Amy okanye uJim enkampanini kodwa xa bephendula bavele baphulaphule ukuba abantu babuza liphi igama baze bathi akakho ngoku kodwa ndingakunceda. Ngokucacileyo igama lichaza ukuba leliphi iphulo abantu abasabela kulo.
Into efanayo isebenza kunye nezandiso zobuxoki. Shayela u-800-555-5555 x3542. Akukho kwandiso 3542 kodwa ikuxelela yonke into ekufuneka uyazi.
Jul 12, 2010 ngo-10: 34 AM
Sasihlala sisenza okufanayo ngeMeyile eNgqo, uPatric! Sasidla ngokutyikitya oonobumba ngegama lobuxoki kunye nesihloko - emva koko sisebenzise oko ukulandelela iphulo kunye nokubonelela. Kwezi ntsuku zokucaca okufunekayo, ndiqinisekile ukuba ukwenza okuqhelekileyo akunakuxatyiswa kakhulu ngoku.
apho usebenza khona
Jul 14, 2010 ngo-10: 33 AM
Iposti enkulu uDoug. Siye sasebenzisa iindlela ezahlukeneyo zale ndlela: http://www.seoverflow.com/blog/call-tracking/roll-your-own-phone-call-tracking-program-it-is-easy/
ixeshana. Licebo elihle kwaye linceda ukubonisa ixabiso lakho kubathengi ngokulula ngakumbi. Kufanelekile ukujonga eso sikripthi kunye ne-Twilio kwabo baqesha oku bodwa.